January 2013 ~ Zawlin IT World
8:57 AM ဂျာနယ်များ No comments
8:07 AM software မြို့ တော်, Speed MP3 Downloader2comments
11:34 PM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
ဒါကတော့ mp3, mp4 တွေကို အသုံးချနည်းနှင့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြရေး သားထားတာပါ . mp3 mp4 ကိုင်နေတဲ့ သူများအတွက်တော့ ဖတ်ထားသင့်တဲ့စာအုပ်လေးပါ
ခုရေးထားတာ မြန်မာလိုနော် . သေချာနား လည်အောင် ဖတ်ပေးပါ ။ ခဏခဏ မေးနေကြလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
11:23 PM မြန်မာလိုနည်းပညာစာအုပ်များ No comments
အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ လေ့လာချင်သူများအတွက် ဆရာဦးသိန်းလွင်ရဲ့ အခြေခံ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ စာအုပ် နှစ်အုပ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေကို ကိုကီးဆီကနေ ရလာတာပါ။ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်တွင် Download လုပ်ယူလိုက်ပါ။ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
<<<< download >>>> Part 1
<<<< download >>>> Part 2
11:26 PM မြန်မာ Dictionary No comments
အရင် ဗားရှင်းက Framework 4.0 ရှိမှပဲ အဆင်ပြေတာမို့ ခု 2.0 နဲ့ပြန်လုပ်ထားပါတယ်။ Windows OS အများစုဟာ 2.0 ကို အသင့်ပါရှိတာမို့ စက်တိုင်းတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒီ Dictionary မှာလည်း ကိုယ်သိချင်တဲ့ စကားလုံးတွေကို အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ၊ မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် သို့အသီးသီး အပြန်အလှန်ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးလျှင် ကိုယ်ထပ်ထည့်ချင်သော စကားလုံးများရှိပါက ထပ်၍ထည့်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖျက်ချင်လိုသော စကားလုံးများကိုလည်း ဖျက်နိုင်ပါမည်။
7:50 AM blog နည်းပညာများ No comments
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေမိတ်များခင်ဗျာ!!! ဒီနေ့ ကျနော်ဆွေးနွေးပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ blog template တွေ ရဲ့ header မှာ မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံထည့်နည်းနှင့် တချို့ template တွေမှာ ဖျောက်ဖျက်လို့ မရတဲ့ header AddaGadget ကိုဖျောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်. ဘာကြောင့် ဒီ header AddaGadget ကိုပယ်ချင်ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ မိမိတို့header မှာထည့်လိုက်တဲ့ပုံပေါ်မှာ ဒီ header မှာရေးထားတဲ့စာတမ်း ( သို့ ) ပုံတွေက ပါနေတော့ header ပေါ်မှာ ပုံက နှစ်ပုံ ( သို့ ) ပုံပေါ်မှာ စာတမ်းတွေပါနေတဲ့ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်.အောက်မှာ ကျနော် ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းပြပေးပါမယ်...
မူလ template မှာပယ်လို့ မရတဲ့ပုံ
3:18 AM internet downloadmanger, software မြို့ တော် No comments
internetdownloadmanger uplate ထွက်လာလို့ အသစ်သစ်မှသုံးခြင်သူများအတွက် Patch file လေးနဲ့fullvasion အမြဲတမ်းအသုံးပြုလို့ ရအောင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ install ထည့်နည်းကို video file နဲ့ တင်ထားပေးပါတယ်။ Youtube ကြည့် လို့ အဆင်မပြေသူများ comments ပေးသွားကြပါခင်ဗျာ ကျွန်တော် mediafire ကနေပြန်တင်ပေးပါမယ် အားလုံးနှစ်သစ်မှာအဆင်ပြေပျောါရွှင်နိုင်ကြပါစေ